Sanibonani bangani, kusayithi lethu Izifundo zokwakha imisho zaseJalimane Kunezindatshana eziningi ezihlobene nayo. Abangane bethu abaningi bafuna sibeke izifundo zethu ekwenzeni imisho ngesiJalimane ngokulandelana.
Ngokwesicelo sakho, sibhale izifundo zethu zokwakha imisho zaseJalimane kusuka ku-zero kuye phambili ngokulandelayo. Ungafunda izifundo zethu ngezansi ukuze uqale ngento yokuqala.
Ngenhla Izifundo zokwakha imisho zaseJalimane Ungayifunda ngokulandelana. Siyethemba ukuthi uzozuza kakhulu ezihlokweni zethu ezichazwe ngesiTurkey ngokuqhathaniswa.
I-German Plusquamperfekt - Isikhathi Esidlule SaseJalimane